Recycled Eco-friendly Spun Polyester manjaitra kofehy
Kofehy fanjairana polyester voaverina
Ny kofehy fanjairana MH ECO Polyester dia antsoina koa hoe kofehy fanjairana polyester voahodina, mampiasa kofehy manokana vita amin'ny tavoahangy plastika namboarina miaraka amina andiana dingana sarotra, 100% namboarina, natao hanampiana amin'ny fanatontosana ny fanamby, ny fitafiana akanjo tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana.
Spec: Manana 20S / 2, 20S / 3, 30S / 2, 40S / 2, 60S / 2 izahay, izay mety indrindra amin'ny akanjo baingo, fanaovana fanatanjahan-tena, akanjo akaiky, fitafiana mahazatra, amboradara ary fampiharana amin'ny akanjo ivelany.
taratasy fanamarinana: Global Recycled Standard (GRS) 4.0
100% post an'ny mpanjifa vita amin'ny polyester vita amin'ny polyester, fibre Polyester voamarina avy amin'ny GRS (Global Recycling Standard), vahaolana hafanana maina mafana tsara, mampitombo be ny tombom-barotra ho an'ny mpanjifa, vokany manjaitra tsara, haingam-pandoko miloko tsara.
Ny kofehy fanjairana MH ECO Polyester dia manome kofehy fanjairana eco hafa fa tsy mahafoy tena amin'ny seza fanjairana. Fampiasana kofehy fanjairana MH ECO Polyester, ary hiarovan-tena hiaro ny tany!
20S2 2500Y ECO Polyester fanjairana
100% Famoronana lakana fanjaitra ny Eco Polyester